67Ha : Zana-tsokatra miisa 75 tra-tehaka -
AccueilSongandina67Ha : Zana-tsokatra miisa 75 tra-tehaka
Zana-tsokatra miisa 75, natao tanaty valizy feno lamba indray no sarona teny amin’ny Jovenna 67Ha ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany hariva. Vehivavy iray manodidina ny 35 taona sy lehilahy iray hafa no nahatrarana ireo harem-pirenena ireo tamin’izany. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena nandray an-tanana ny raharaha, dia fampilazam-baovao avy amin’ny naman’izy ireo teny amin’ny seranam-piaramanidina etsy Ivato, tamin’io talata io ihany no nahafantarana ny fisian’ireto mpanao ratsy ireo. Tsy niandry ela fa napetraka avy hatrany ny vela-pandrika ka izao voasambotra izao ny atidoha nikotrika. Nentina nanaovana fanadihadiana teny amin’ny borigadin’ny zandarimaria teny Betongolo moa ireo mpanondrana sokatra an-tsokosoko ireo taorian’izay, ka tamin’izany no nahalalana fa nentina taksiborosy avy any Toliara, ary nokasaina hamidy eto an-drenivohitra ireo entana ireo. 12.000 Ar no saika hamarotan’ireto olon-dratsy ny iray tamin’izany saingy rava maina io teti-dratsy io noho ny fidiran’ny manam-pahefana an-tsehatra ara-potoana. Raha ny voalaza ihany koa, dia telo andro talohan’ny nahazoan’ny mpitandro filaminana fampandrenesana no efa nigadona sy nihaodihaody teto Antananarivo ireo olona ireo, ary efa in-telo nifindrafindra toerana tamin’ny fitadiavana mpandray ireo zana-tsokatra ireo saingy ny harivan’ny 27 martsa io vao tratra.
Efa nohamafisin’ny fitondram-panjakana hatramin’izay, fa tsy handeferana ny fanondranana harem-pirenena an-tsokosoko, ary tafiditra ao anatin’izany ny sokatra. Efa niady ary nangataka tolo-tanana avy amin’ny Cites mihitsy aza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny taona 2014 hahafahana miady ary mamongotra ity asa maloto ity hatrany ifotony. Efa nivaly io fangatahana io amin’izao fotoana izao, ary efa nisy ny fanadihadiana lalina natao tamin’izany. Efa maro ihany koa ny fepetra noraisina hahafahana miaro ireo harena voajanahary eto amitsika izay saika lasibatry ny fanondranana an-tsokosoko foana isan-taona. Omaly moa no nentina teo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha, ary taorian’izay dia nadoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora ireo olona roa ireo. Nalefa eny amin’ny tompon’andraikitra mpikarakara biby eny Ambohidratrimo kosa ireo sokatra miisa 75, izay marihina fa efa maty ny 04 tamin’izany.